စနစ်တကျခိုးကြမယ် - MYSTERY ZILLION
November 2009 edited November 2009 in My Article
လိုချင်တဲ့ဆော့ဝဲရှာမရတာ တစ်ခြားဆော့ဝဲလိုချင်တာတွေကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်မရတွေ အဲဒါတွေမေးတာ များနေတာတွေ့နေပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာ အကြံပြုကြည့်ပါတယ် ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Google မှာဘယ်လိုရှာတယ်ဆိုတာ အနည်းအကျဉ်းတောသိရမယ်ပေါ့ ဆော့ဝဲခရက်ရှာတဲ့လူဆိုမှတော့ ဒါတွေလောက်တော့ လုပ်တတ်ကြပါတယ် ရှာတာလည်း ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး AND OR တွေနဲ့မဟုတ်ပဲ Keywords ပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး ရှာတတ်ရင်ပဲအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ ဆော့ဝဲအကြောင်းကို အသေအချာသိအောင် လေ့လာပါ ဘာလုပ်ဖို့သုံးတာလဲ ဘယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်တာလဲ ဗားရှင်းဘယ်လောက်လဲ မူရင်းကုမ္ပဏီရဲ့ ဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာက ဘယ်မှာလဲ အဲဒါတွေကိုလေ့လာပါ။ ဆော့ဝဲအားလုံး ပိုက်ဆံပေးရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ အလကားပေးသုံးတဲ့ ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Driver လိုချင်ရင်တော့ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ မူရင်းဝဘ်ဆိုက်ကိုသာသွားပါ မရမရှိရပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာပဲလိုချင်လိုချင် မူရင်းကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်မှာ အသေအချာဖတ်ပါ စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့။
(၂) မူရင်းဝဘ်ဆိုက်က ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ကနေပဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။ မူရင်းဝဘ်ဆိုက်က မရမှသာ အခြားသော ဝဘ်ဆိုက်တွေကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြုပြင်ပြီးသားဆိုရင် စိတ်မချရပါဘူး ဆော့ဝဲနဲ့တစ်ပါတည်း အခြားအရာတွေ ပါမလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး Installer နဲ့ရောထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်တွေ ထရိုဂျန်တွေဟာ Antivirus တိုင်းမိမယ်လို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ တစ်ခြားဆိုက်ဆိုရင် ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ တော်တော်များများက Pirate Software တွေကို တင်လေ့ရှိတာက rapidshare, mediafire, megaupload, torrent တွေနဲ့တင်ထားတာများပါတယ်။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ ဆော့ဝဲနာမည်ရယ် အဆစ်အနေနဲ့ ကိုယ်အဆင်ပြေမယ့် rapidshare, mediafire အဲဒီ့လို စကားလုံးပါ Keyword အဖြစ်ထည့်ရှာလိုက်ရင် တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီ့လို အလုပ်ရှုပ်မခံချင်လည်း rapidshare, mediafire စတာတွေကို ရှာပေးတဲ့ Search Engine လိုဟာတွေရှိပါတယ် အဲဒါတွေနဲ့ရှာကြည့်ပေါ့။ အဲဒီ့လိုဆိုက်တွေရဲ့လိပ်စာကိုလည်း လွယ်ပါတယ် Google မှာ rapidshare search engine တို့ ဘာတို့ရိုက်ရှာလိုက် တွေ့ပါတယ် ပေါမှပေါ။ torrent ကတော့ ဗမာပြည်ကနေ ဒေါင်းလို့မရတော့ ဗမာပြည်ကဆိုရင်တော့ မကြိုးစားပါနဲ့။
(၃) ဆော့ဝဲတော်တော်များများက အစမ်းသုံးကာလတော့ ပေးတတ်ပါတယ်။ ပြီးရင်ကိုယ့်စက်မှာ Install လုပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီ့နေရာမှာလည်း Next ကိုပဲရမ်းမနှိပ်ပါနဲ့ စာတွေကိုဖတ်ပြီး မှတ်ထားပါဦး Dialog Box ပွင့်လာတိုင်း ဿEnter ရမ်းနှိပ်တာ Ok, Cancel ရမ်းနှိပ်တာ မလုပ်ပါနဲ့ဘာမေးတာလဲ အသေအချာဖတ်ပါ ပြီးမှာသာ သင့်လျော်ရာကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် Full Version သုံးဖို့အတွက် ဘာလိုအပ်သလဲကြည့်ပါ တစ်ချို့က Serial Key တောင်းတတ်ပါတယ် တစ်ချို့ကတော့ Online Registration လုပ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။
(၄) Serial Key လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ထပ်ရှာပါ ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ Google ကိုပဲမေးလိုက်ပါ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆော့ဝဲနာမည်အပြင် အခြားအရေးကြီးတဲ့ Keyword အနေနဲ့ Serial တို့ Product Key တို့အဲဒါမျိုးတွေ ထည့်ပေးပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ ရှာတတ်ရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ် Google ဆိုရင် + ဆိုရင် မပါမဖြစ်စကားလုံးပေါ့ အဲဒါမျိုးကို ဆော့ဝဲနာမည်ရှေ့တို့ +Serial ဆို့အဲဒါမျိုး ထည့်ရှာပေါ့ဗျာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကိုယ့်လိုခိုးတဲ့လူ အများကြီးပါ ၈၀% တွေ့တာများပါတယ်။ Serial Key တွေကြည့်ပဲပေးတဲ့ ဆိုက်တွေလဲရှိပါတယ် အဲဒါတွေလည်းရှာကြည့်ပါ။ ဒါမှမတွေ့ရင်တော့ Keygen တွေရှာပါ Keygen ဆိုတာကတော့ Serial တွေကို Generate လုပ်ပေးတဲ့ Program လေးတွေပါ ဒုတိယဦးစားပေးပဲ Keygen ရှာပါ ဗိုင်းရပ် ထရိုဂျန်ပါတာများပါတယ်။
(၅) Online Registration လုပ်ခိုင်းတာတို့ Serial ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှ အင်တာနက်မှာ ပြန်စစ်လို့ မဟုတ်ဘူးတို့ ဘာတို့ပြောနေရင်တော့ Crack ရှာမှ အဆင်ပြေပါမယ် Crack ဆိုတာကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပြောရရင် Serial မပါရင်ပေးမသုံးတာတို့ Serial မှန်မမှန် အင်တာနက်မှာ စစ်တာတို့ကို ဆော့ဝဲထဲကနေ ဖြုတ်ပေးမယ့် ပရိုဂရမ်လေးတွေပါပဲ တစ်ချို့တော့ မူရင်းဆော့ဝဲကို ပြင်ပြီးသားလေးတွေနဲ့ အစားထိုးပေးရပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ လွယ်ပါတယ် Serial ရှာသလိုပဲ အပို Keyword ကို Crack လို့ပြောင်းရှာပေါ့။
(၆) အန္တရာယ်ကင်းရေးကလည်း အရေးကြီးပါတယ် ပြုပြင်ထားတာတွေ မတတ်သာလို့ ခိုးသုံးရပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကာကွယ်ရပါမယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် Double Click နှိပ်ပြီး စမ်းလေတော့ ဘယ်လို Antivirus ကိုမှအားမကိုးပါနဲ့ ကောင်းတာကတော့ VMWare or Virtual Box လိုတစ်ခုခုမှာ Window တစ်ခုတင်ထားပါ ဆိုက်မကြီးချင်ဘူးဆိုရင် MicroXP လိုဟာကို တင်ထားလိုက်ပါ တင်ပြီးတာတောင် 300 MB လောက်ပဲရှိပါတယ်။ Keygen တို့ Crack လုပ်တာတို့ကို အဲဒီ့အထဲမှာပဲ Run ပါဒါဆိုရင် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ စက်အန္တရာယ်ကင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် Crack လုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲထဲမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဟာပါသွားရင်တော့ မတတ်နိုင်ပါဘူး ဒီလောက်တော့ သည်းခံရမှာပါ။ အဲဒီ့ VMWare လိုဟာမှ တင်ထားတဲ့ MicroXP Window လိုဟာကတော့ ဗိုင်းရပ်ဝင်သွားမှာပေါ့ သုံးမရတော့ဘူးထင်ရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး ပြန်တင်တော့ အလွန်ဆုံးကြာ ၅ မိနစ်ပါပဲ။
(၇) သုံးလို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ သတိထားရမယ့် အချက်တွေရှိပါတယ် ခိုးသုံးထားတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ Update လုပ်လိုက်ရင် Crack လုပ်ထားတာဆိုရင် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ် IDM သုံးတဲ့လူတွေ သိပါလိမ့်မယ် Crack လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို Update လုပ်လိုက်တော့ မရတော့ဘူးပြောတာပါ။ ဒီတော့ Auto Update လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘုရားသာတထားပါ အသုံးတည့်နေရင်တော့ သိပ်လည်းမလိုအပ်ရင်တော့ Update မလုပ်ပါနဲ့။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် အကြမ်းသိလောက်ပါပြီ ဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ဘာမှ ဖြစ်မလာပါဘူး စမ်းကြည့်မှရပါမယ် ရေးထားတာကိုက ဖတ်ကောင်းအောင် ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး စမ်းကြည့်မှသိအောင်ရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဆော့ဝဲပေါင်းစုံ ဝယ်မသုံးနိုင်ပါဘူး ငမွဲပါ စျေးကြီးပြီး မဖြစ်မနေလိုတဲ့ဟာတွေ သူခိုးဗားရှင်းများနဲ့ သုံးရတာပါပဲ။ လူကြားလို့ နည်းနည်းအဆင်ပြေအောင် Pirate သုံးတယ်တွေဘာတွေ ပြောပါဘူး ကျွန်တော်လည်း အသားကုန်ခိုးဖူးတဲ့ သူခိုးအကြီးစားပါပဲ။ အခုလည်းသူခိုးလမ်းပြ လုပ်ပေးထားပါတယ် ကျွန်တော့်ဆို လမ်းပြမယ့်သူခိုးကိုမရှိပါဘူး ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်သင်ပေါ့ဗျာ Keygen တွေ Crack တွေရဲ့ဆိုးကျိုးများ ခံခဲ့ရတာလည်း များပါပေါ့လား။ အကြံပေးချင်တာက Search Engine ကိုကောင်းကောင်းခိုင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါလေးတွေ လုပ်တတ်ဖို့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဘွဲ့တွေ ဒီပလိုမာတွေ မလိုပါ လူတိုင်းလုပ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားချင်တဲ့လူများ ကြိုးစားကြည့်ကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိူင်ငံကလူတွေဟာ ထမင်းကို ချက်ကျွေးရုံနဲ့မရဘူး၊ ပါးစပ်ထဲအထိခွံ့ကျွေးမှစားတတ် သလိုဖြစ်နေကြတာကြာပါပြီဗျာ။
အဓိကကတော့ စာဖတ်ပျင်းတာ၊ မပျင်းသော်လဲ မဖတ်ရဲဘူး။
တကယ်တော့ စာများများဖတ်ပြီးလုပ်ရင် အလွယ်တကူသိနိူင်မယ့်ဟာကို စာဖတ်ပျင်း ပြီး သူများခွံ့တာစောင့် နေရင်တော့လဲ ခွံ့တာလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ကြပေါ့နော်။
ကိုသင်ကာပြောတာကို သွားသတိရမိတယ်။ ခွံ့ပြီးကျွေးတာတောင် ဘယ်လို ဝါးရမလဲလို့ ပြန်မေးနေတာတွေတဲ့ :d
ကိုယ်လိုချင်တာကို ရှာတဲ့နေရာမှာ အဲဒီ့ဆော့ဖ်၀ဲလ်ရဲ့ ဗားရှင်းအတိအကျ သိသော်လည်း ကိုယ်သုံးမယ့် ဗားရှင်းဟာ အလွန်update ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် အလွန် out of date ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နေရင် ရှာရခက်တတ်ပါတယ်.။ အဲလိုဟာမျိုးတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲ.။
အဲဒါတွေကတော့ projectw, forumw တို့လို pirate forum တွေမှာ သွားမေးရမှာလေ။ MZ နဲ့တော့ software pirate ကတော့ သိပ်မဆိုင်ဘူးထင်တာပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေက pirate ကြီးတွေလေ။ ကိုယ်လည်းခိုး။ ခိုးပြီး သူများကိုလည်းဝေ... ဟေးဟေး...ပျော်စရာကြီး..
ဆော့ဝဲအသစ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းခက်မပေါ့ သို့ပေမယ့် နာမည်ကြီးဆော့ဝဲမှန်သမျှ ဒီနေ့ထွက် မနက်ဖြန် အင်တာနက်ပေါ်ရောက်တာပါ နာအမည်အရမ်းမကြီးတဲ့ တိုလီမိုလီ သေးသေးလေးတွေဆိုရင်တော့ တော်တော်များများက Protection အတွက်အရမ်းအရေးပေးပြီး မရေးနိုင်ကြပါဘူး Major Version မပြောင်းရင် ပြောင်းခဲပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Version အဟောင်းက Key တွေ Keygen တွေနဲ့စမ်းကြည့်ပါ ရတာများပါတယ်။ အဲဒါမှမရရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးလေ စောင့်ပေါ့။ ဟောင်းလေလေ ရှာရလွယ်လေလေပဲ တစ်ခုတော့ရှိတယ် မူရင်း ဝဘ်ဆိုက်နေတော့ စိတ်ချရတဲ့ဟာယူလို့မရဘူးပေါ့။ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ old application တို့ old version တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ အဲဒါတွေပဲစုပေးထားတဲ့ ဆိုက်တွေရှိပါ့ဗျာ။ နောက်ဆုံး DOS ခေတ်က application တွေအထိလိုချင်သလား wordperfect, dBase လိုဟာတွေအထိ စုပေးထားတဲ့ဆိုက်တွေတောင်ရှိသေးဗျာ။ မယုံရင်စမ်းရှာကြည့်ပါ။
သူများဟာ ခိုးသုံးရတာ သိပ်ပျော်ကြတယ်ဟုတ်လား :d
ကိုယ်လုပ်ထားတာ သူများခိုးခံရတာ သိရင် တွန့်တွန့်လန်နေမှာမြင်ယောင်သေးတယ်
ဆရာသမားတွေကလဲ အတက်ကောင်းတွေသင်ပေးကြတယ် :d
ဟုတ်ပါ့။ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲလေ။ ဝယ်သုံးဖို့ကျပြန်တော့လည်း ဒေါ်လာစျေးနဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကမကိုက်။
ဒါတောင် crack လုပ်ပြီးသားကို၊ ဆိုင်ကြီးတွေမှာ လေးငါးထောင် ပေးပြီး ဝယ်သုံးတဲ့
ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကို အပြစ်တင်ဖို့လည်း မတရားဘူးဗျ။
လူပျိုရေးထားတာက ခိုးနည်းတော့ရှိတယ်။ ဒီလိုခိုးလို့ရတယ်။ ခိုးတာမခိုးတာ သူတို့အပိုင်းပေါ့။
အဲဒါဆို ကျွန်တော် လည်း သူခိုးအကြီးစားကြီးဖြစ်နေပြီထင်တယ် ... Google ကနေ စျေးအရမ်းကြီးတဲ့ software အနည်းအကျင်းလောက်ပဲ ရှာရခက်တာဗျ ... ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ပေးရတဲ့ ဟာတွေက လွဲပြီး ကျန်တဲ့ software တွေက ရှာရတော်တော်လွယ်ပါတယ် ..
ဟုတ်တယ်နောှ ကိုသာသာ။ ခုလက်ရှိကမဿဘာပေါှမှာ လူတောှတောှများများက ခိုးနေကြတာပါပဲ။ လူငယ်တွေကအစ လူကြီအဆုံး ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်တတောက်တောက်နဲ့ သီချင်း ရုပ်ရှင် ဆော့ဝဲ အကုန်ပါပဲ ခိုးနေကြတာ။ ပောှတင်တမျိုး ကွယ်ရာတဖုံပေါ့။
ဿFree Software နဲ့ Open Source ကျေးဇူးကြောင့် လူတွေ အကုသိုလ်နည်းနည်း လျော့သွားကြတာထင်တယ်။ Free Software နဲ့ Open Source ကျေးဇူးကြောင့် လူတွေ ငြိမ်းချမ်းကြပြီး အချင်းချင်းကူညီချင်စိတ်တွေ ပောက်ဖွားနေကြတာနောှ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်တိုင် Crack နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
Crack လုပ်ရတာ တကယ်တမ်းလုပ်ကြည့်ရင် လွယ်ပါတယ်။
မြန်မာ Program တွေဆို ၅ မိနစ်နဲ့ရတယ်။ Protection ကောင်းလွန်းပါတယ်ဆိုရင်တောင် အကြာဆုံး နာရီ၀က်ဘဲ။ မြန်မာ Programmer တွေ အနေနဲ့ Software Protection ကို အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Cracking ကို လည်း လေ့လာသင့်ပါတယ်။
အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ဒီနေ့မှ ဖိုရမ်ထဲရောက်လာတာမို့လို့ပါ။
candle101 wrote: »
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်တိုင် Crack နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ Crack လုပ်ရတာ တကယ်တမ်းလုပ်ကြည့်ရင် လွယ်ပါတယ်။
မြန်မာ Program တွေဆို ၅ မိနစ်နဲ့ရတယ်။ Protection ကောင်းလွန်းပါတယ်ဆိုရင်တောင် အကြာဆုံး နာရီ၀က်ဘဲ။ မြန်မာ Programmer တွေ အနေနဲ့ Software Protection ကို အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Cracking ကို လည်း လေ့လာသင့်ပါတယ်။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ဒီနေ့မှ ဖိုရမ်ထဲရောက်လာတာမို့လို့ပါ။
ကောင်းပါလေ့ဗျာ အဲဒါဟုတ်ပါတယ် ဒါက အများနားလည်အောင်ရေးထားတာ ဖြစ်နေလို့ Technical တွေမပါအောင် ပြောထားတာပါ တစ်ခြားဘက်မှာ Thread တစ်ခုအသစ်တင်ထားတာ တွေ့လို့အဲ့ဒီဘက်လာပြောမယ် ဒီဘက်က လွယ်လွယ်နားလည်တဲ့ အနေအထားဖြစ်အောင်ရေးထားတာပါ။
Free Software နဲ့ Open Source ကျေးဇူးကြောင့် လူတစ်ချို့တော့ အကုသိုလ်နည်းသွားတာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို Development အကုန်လုံး Open-Source တွေ Freeware Tools ပဲသုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သဘောကျတာနဲ့ လူအများစု သဘောကျတာ မတူဘူးဗျ။ အများခိုးသုံးလို့ လွယ်လွယ်အဆင်ပြေနေတဲ့ အခြေအနေမှာ ခိုးမသုံးပဲ ဒုက္ခခံသုံးနေရရင် စပြီးသုံးတဲ့လူတွေမှာ သုံးချင်စိတ်ပျောက်သွားမှာပါ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်လောက် တိုက်တွန်းတိုက်တွန်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အလကားရတဲ့ဟာတွေ ဘယ်လိုပဲ ကောင်းပါတယ် ပြောပြော အသုံးကျပုံချင်းသာ တူချင်တူမယ် အသုံးပြုရလွယ်ပုံချင်းကျတော့ အခုထက်ထိ ကွာခြားနေဆဲပါပဲ။ တူညီသွားတဲ့ အခြေအနေမှာ မပူပါနဲ့ လူတိုင်းအလကားရတာကို မသုံးမရှိပါဘူး ဘယ်သူမှမခိုးချင်ပါဘူး။
ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးချင်စိတ်ရှိအောင် ရေးထားတာပါ အင်တာနက်မှာ လိုချင်တာရဖို့ ရှာတတ်ဖို့အင်မတန် အရေးကြီးတာ သုံးတဲ့လူတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်လို့ သိစေချင်ပါတယ် ခိုးတာမခိုးတာကတော့ သူတို့အပိုင်းပါ ကိုယ်တိုင်မခိုးလည်း သူများကခိုးပေးရမှာပါ ဒါဆိုရင် ခိုးပေးတဲ့လူရော ခိုးသုံးတဲ့လူရော နှစ်ယောက်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ် မဟုတ်လား ကိုသုံးချင်တာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခိုးပေါ့ ဒါဆိုတစ်ယောက်တည်း အေးတာပဲလေ စသုံးကာစလူတွေ ဒီလိုရှာရပါလို့ပဲသိသွားတာဖြစ်ဖြစ် စမ်းရှာကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်လို့ရသွားပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး ရှာရတယ်ဆိုတာ သိသွားရင်ပဲတော်ပါပြီ။ ကျွန်တော်ပြောလို့ ကျွန်တော်အကုသိုလ်ဖြစ်လည်း ဖြစ်စမ်းပါစေ တစ်ခြားခိုးပေးရမယ့်လူတွေ နည်းသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် ရှာတာကိုတစ်ခြားဘက်မှာ အသုံးချသွားတတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်ပါတယ် ဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီ။:P
ခိုးတာမခိုးတာကတော့ သူတို့အပိုင်းပါ ကိုယ်တိုင်မခိုးလည်း သူများကခိုးပေးရမှာပါ ဒါဆိုရင် ခိုးပေးတဲ့လူရော ခိုးသုံးတဲ့လူရော နှစ်ယောက်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ် မဟုတ်လား ကိုသုံးချင်တာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခိုးပေါ့ ဒါဆိုတစ်ယောက်တည်း အေးတာပဲလေ ......ကျွန်တော်ပြောလို့ ကျွန်တော်အကုသိုလ်ဖြစ်လည်း ဖြစ်စမ်းပါစေ တစ်ခြားခိုးပေးရမယ့်လူတွေ နည်းသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် ရှာတာကိုတစ်ခြားဘက်မှာ အသုံးချသွားတတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်ပါတယ် ဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီ။:P
ဘုရားတပည့်တော် သည် ဤကဲ့သို့ torrent ဆွဲထားသော ebook များကို မျှဝေသော
ကုသိုလ်ကြောင့် ပညာတွေ အများကြီး တတ်ပါစေ ဘုရား။ :P
(Sorry ဗျာ ဒီနေ့ အူရွှင်နေလို့ ရေးမိပါတယ်။ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ဦး)
ခင်ဗျားက အီးဘုတ်အုပ်တွေ ဘယ်ရှာသလဲရေးလေ :P ပြောသာပြောသာ Software ကတော့ မခိုးတာတော်တော်ကိုကြာပြီ ဒါပေမယ့် အီးဘုတ်အုပ်ကတော့ အနည်းဆုံး တစ်ပါတ်ကို တစ်ခါလောက်တော့ မရမကကိုခိုးနေဆဲပဲဗျ အဲဒါကတော့ဖျောက်မရဘူး အကျင့်ဖြစ်မယ် အပြင်မှာလည်း စာအုပ်ခိုးတယ်မဟုတ်လား အဲဒါတွေကပိုပြီးရှာကလွယ်သလိုပဲ ကြည့်ရတာ Serial/Crack မလိုလို့ထင်တယ်နော် ဟီးဟီး
ဒီ အတိုင်း ဆို နောက် ၁၀ နှစ်ကြာလည်း မြန်ပြည်မှာ Software Company တွေပေါ်မှာ မဟုတ်ဘူး ။
ဘာပဲ ပြောပြော ခိုး ကူး Software နဲ့original က ကွာတာက ကွာတာ ပဲ။
(အဲလိုပြော လို့ကျွန်တော့် ကို Original Software ၀ယ်သုံးတဲ့ သူ မအောင့် မေ့ နဲ ့.....ကျွန်တော် လည်း အများသူ ငါလို ပဲ.....software သူခိုး ပါဗျာ...:D)
ဒီလို ခိုးသုံးတာကျတော့ အဒိနဿဒာန ကံမြောက်လားဟင်..
စာအုပ် တွေကိုပါ Serial တွေနဲ့ထားထားတာ ကျနော်တွေ့ဖူးတယ်ဗျ။ သူလည်း ဆော့၀ဲအတိုင်းဘဲ စီရီရယ်မရှိရင် အရေးကြီးတာတွေ ပေးမဖတ်တော့ဘူး။
ကျနော် စာအုပ်တစ်အုပ်ခရက်လုပ်ဖူးတယ်။ ဆော့၀ဲထက်ခက်တယ်။ ခရက်လုပ်တာမတတ်ရင် စာတွေပါ ပါသွားတယ်။
gwasar wrote: »
ဒီလို ခိုးသုံးတာကျတော့ အဒိနဿဒာန ကံမြောက်လားဟင်.. မသိလို့မေးတာနောှ.. :d
အဲဒါအရေးကြီးတယ်ဗျ အဒိနဿဒာန မြောက်တယ် ဒါ့ကြောင့် ဘုန်းကြီးဆိုရင် အဲဒါပြဿနာတော်တော်ကို ကြီးတယ် အဒိနဿဒာန က ပါရာဇိက မှာပါနေတယ်မဟုတ်လား။ မသိရင်တော့ မမြောက်ပေမယ့် သိနေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါပြဿနာတော်တော်ကြီးပဲ :d
ဟုတ်တယ် ဟိုတစ်လောက ကိုယ်တော် တစ်ပါးကို အဲဒါပြောမလို့ဟာ အားနာလို့ဗျာ။:O
ဘုန်းကြီးတွေမှာ Pirated/Crack ဝယ်သုံးရင်လည်း ကံမြောက်တယ်။
Ebook ဆွဲချရင်လည်း ကံမြောက်တယ်။
ကိုယ်တိုင် Crack လုပ်ရင် အပြစ် ပိုကြီးမယ် ထင်တယ်နော်။
ဒကာ တွေကလည်း ခိုးရာပါ ebook ကြီးတွေ၊ software ကြီးတွေတော့ မလှုသင့်ဘူးဗျနော်။
အင်းဟုတ်တယ်ဗျ တချို ့စာသင်တိုက်တွေမှာဆိုလည်း အဲဒါကိုတော်တော်တင်းကျပ်ထားတယ်
ဒါပေမယ့်လည်း ၀ယ်လည်းလှူမှမလှူနိုင်တာကိုးဗျာ ကိုယ်ဖာသာတောင်အနိုင်နိုင်ခိုးနေရတာ
အမှန်မှန်တော့ ရဟန်းသံယာတွေပါ ကိုသေတဿတာပြောသလိုမျိုး opensource software တွေသုံးရင်
ကျနော်​ကတော့ VM Ware မှာ ဝင်း​ဒိုး​တင်​ပြီး​ရင် snap shot လုပ်​ထား​လိုက်​တယ်။ နောက်​ပိုင်း ဘာ​ပဲ တင်​တင် အမှားပါ​ခဲ့​ရင် အဲ​ဒီ​ကို ပြန်သွား​လိုက်​တာ​ပဲ။ အတတ်​နိုင်​ဆုံး မ​ခိုး​ဖြစ်​အောင်​လုပ်​တာ​ပဲ။ စာအုပ်​ကတော့ အား​တိုင်း​ခိုး​နေ​တာ..
ခိုးတာလို့မပြောပါနဲ့ ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေလို့ပြောပါ။ ခိုးတာကိုခိုးတာလို့ပြောရင်ဘယ်သူကြိုက်မလဲနော်။
ခိုးတယ်လို့မပြောရင် ခိုးမှန်းမသိပဲ အလကားရတယ်ထင်နေကြလိမ့်မယ် အဒိန္နဖြစ်ပြီးသားကို မုသာဝါဒ ထပ်မပါတာကောင်းပါတယ်။ တကယ်ကတော့ မခိုးလည်း အသက်ဆက်လို့ရပါတယ် အခုတော့ ခိုးသုံးတာ တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး ဝယ်သလားမေးရင် တစ်ချို့ဟာတွေက မဝယ်နိုင်ပါဘူး Photoshop လိုဟာတွေပေါ့ ဈေးကြီးလွန်းတယ် အဲဒီတော့ အစားထိုးသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေ သုံးလိုက်ပါတယ် Photoshop မရှိတော့ Gimp သုံးလို့ဖြစ်တာပါပဲ။
ဆော့ဝဲတွေ ဘာတစ်ခုမှမခိုးတော့ပေမယ့် စာအုပ်တွေကတော့ အကုန်မဝယ်နိုင်ပဲ ခိုးမိနေသေးတယ် အဲဒါကတော့ စဉ်းစားမိရင် အတော်စိတ်မလုံပါဘူး ကိုယ်လည်း စာတွေရေးခဲ့ဖူးတယ် စာတမ်းတစ်စောင်က အနည်းဆုံး ၄ လလောက် အလုပ်လုပ်မှထွက်တယ်။ စာအုပ်ရေးတဲ့လူတွေ ဘယ်လောက် အချိန်တွေလူတွေ ရင်းရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် အဲဒါကြောင့် ကိုယ်မလိုပဲ စာအုပ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး စုတဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး လိုအပ်တဲ့စာအုပ်ကို ကြည့်ပါတယ် လုံးဝမဝယ်နိုင်တော့မှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ် စာရေးသူကို လေးစားသောအားဖြင့် တစ်အုပ်လုံး အသေအချာဖတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ခိုးနေတာတော့အမှန်ဗျ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခိုးနေတုံးပါပဲ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုပိစီရဲ့ http://www.myanmartutorials.com/articles/we-need-to-try-this/ မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Photoshop မရှိတော့ Gimp သုံးလို့ဖြစ်တာပါပဲ။
မြန်မာပြည်က photo studio တွေပိတ်ရအောင်လုပ်လိုက်တာလား။ ခိုးသုံးတာတော့ခိုးသုံးတာပေါ့ နည်းပညာ တို့အတတ်ပညာတို့ဆိုတာက ခိုးမှပိုသိမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခိုးနို င်ရင်တော့ သူခိုးပီသတာပေါ့ သူများကိုခိုးခိုင်းပြီးကိုယ်ကသုံးတော့ သူခိုးသေဖော်ညှိတာပေါ့။
I also use pirate version. I think cracking the soft wares is notasin. Because, cracker uses his own brain in cracking, just likeagame or puzzle. Software developers already protect their soft wares. Likeachess match, who will win in IQ test? I support the crackers side.
@MMKM your getapoint . may be true technically but how abt developer point of view ??? How would your feel if your are suchadeveloper ?? There is no uncrackable software
even through they protect it .nd i suppose we also need to consider as other assumption too . no offense . Cheer !
kho ra tar taung pwtesan tawtaw kone tal bya.whoo! malawel bu ako toot yae. :-(( :-(( >:-)
@Undergarden , we are not allow Burglish. We only allow Unicode or English in our forum.
What you said is totally wrong. No matter how cracker use their own brain to crack the software, they have no right to use or distribute them without the permission. The developer protect them to prevent from stealing. It's notagame, IQ test norapuzzle.
The developer need money to continue their software. Do you think where would they get it?
SO if you can buy it, buy to support the developer.
The crackers are nothing but the thieves!